DHAGAYSO: Shirkadda Golis oo Maanta Garowe ku soo Bandhigtay Adeega cusub ee TAAJ – Radio Daljir
DHAGAYSO: Shirkadda Golis oo Maanta Garowe ku soo Bandhigtay Adeega cusub ee TAAJ
Maajo 14, 2015 10:30 b 0
Khamiis, May 14, 2015 (Daljir) — Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis ayaa maanta mgaalada Garowe ku daah-furtay adeega xawaaladda TAAJ ,waxaana munaasabadda lagu soo bandhigayay oo lagu qabtay hoolka jaamacadda bariga Afrika ka soo qayb-galay madaxda shirkadda .
“Waxaan dadaal ugu jirnay sidii aan TAAJ uga hirgalin lahayn dhamaan deegaanada Puntland ,waana adeeg u sahalaya dadka in lacagahooda loogu soo diro moobilka “ayuu yir maamulaha shirkadda Golis Maxamuud Ismaaciil aw Cismaan oo ka hadlayay kulankii maanta.
Xafladda daah-furka adeega TAAJ,waxaa kaloo ka soo qayb-galay madaxda maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada Garowe,Ganacsato iyo qaar kamid ah masúuliyin horey xilal uga soo qabtay Puntland oo u ku jiro guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey).
“Adeegyada kale ee shirkaddu ay soo kordhisay waxaa ay kala yihin , Video Calling, E-deposit iyo Out bank deposit ,waanad la socotaan in aysan horey uga jirin deegaanadan “ayuu mar kale yiri maamulaha.
Hogaanka ganacsiga shirkadda Golis Cumr Ciise Maxamed (Faaruuq ) oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in shirkaddu ay kordhisay xiriirka wada shaqayn ee ay la leedahay macaamiisheeda ,waxaana uu ka dalbaday shacabka in ay isticmalaaan adeega TAAJ.
Intii lagu jiray soo bandhigidda adeegyadaan waxaa shirkada Golis ay bixisay abaal marino baqtiyaa nasiib ah oo loogu tala-galay in loo xojiyo xiriirka shirkadda iyo macaamiisheeda sida uu sheegay maamulaha Shirkadda Golis ee gobolka Nugaal.
Ugu danbayn ,shirkadda Golis oo Puntland ka howl-galaysay in muddo ah ayaa bilo ka hor soo bandhigtay adeegyada kala Hoodo ,Kaaftoon iyo waliba Xogmaal oo dhamaantood loogu tala-galay in ay isticmaalaan macaamiisheeda.
JAWAARI: Maamul Goboleedyada dalka ka jira Looguma yeeri karo Dowlad-Goboleedyo